အလုပ်ထဲတွင် ရာထူးတိုးစေရန် အကောင်းဆုံးသော လက်တွေ့အသုံးကျ အကြံဥာဏ်များ - Myanmar Network
အလုပ်ထဲတွင် ရာထူးတိုးစေရန် အကောင်းဆုံးသော လက်တွေ့အသုံးကျ အကြံဥာဏ်များ
Posted by Betty on May 29, 2015 at 11:55 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
''မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးစားလုပ်ရမည့် အလုပ်နှင့် အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။" - မိုဖယ်ရာ
၄င်းစိတ်နေသဘောထားသည် သင့်အား အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်နှစ်ခု ရရှိစေကောင်းရရှိစေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင့်အား အလုပ်တွင်ရာထူးတက်စေမည်လားဆိုလျှင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာစေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ များပြားလွန်းသည့်လူများသည် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရရန် သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသည့် တာဝန်လွှဲအပ်မှု အသစ်တစ်ခုရရှိရန် အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြခြင်း တစ်မျိုးတည်းက သူတို့ လိုအပ်သောအရာအားလုံးဟု ထင်ကြပါသည်။ သို့သော် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၄င်းတစ်ချက်တည်းက လုံလောက်မည့် ပုံစံမရှိပါ။ သင်၏ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးမှု အလဟာသ ဖြစ်မသွားစေရန် သေချာဖို့ သိထားရမည့် လက်တွေ့အသုံးကျ အကြံဥာဏ် အချို့တင်ပြလိုက်ပါသည်။
သင်၏ ဦးတည်ချက်ကို သင်သိပါ။
ရာထူးတိုးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသော လွဲမှားသည့်အယူအဆမှာ ၄င်းတို့သည် သဘာဝအတိုင်း အချိန်ကြာလာလျှင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်ဟု ယူဆခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ရာထူးတိုးခြင်းနှင့်ထိုက်တန်နေပြီဟု ထင်မြင်နေရုံနှင့် မလုံလောက်ပါ။ သင်သည် အလုပ်၏ လိုလားချက်များကို နားလည်ရမည့်အပြင် သင်က ဘယ်လို ၄င်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ပြသနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် သင်သည် လက်ရှိအလုပ်အတွင်းမှာပင် ရာထူးတက် ခြင်းကို လိုချင်ပါသလား၊ (သို့မဟုတ်) အခြားနေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်ဆင့်မြင့်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ အစကတည်းကပင် သင်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းမှုရှိပါစေ။ ထိုအခါမှ သင့်ကို ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးမည့် မှန်ကန်သော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမျိုး သင် လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ အထက်အရာရှိကို သင့်ဘက်တွင်ရှိနေစေပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ဌာနတွင်း ရာထူးတိုးခြင်းမျိုးကို ရည်ရွယ်ထားပါက သင်၏ အထက်အရာရှိကို သင့်ဘက်တွင်ရှိစေ ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံသည့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု အစည်းအဝေးမျိုး (one to one review meeting) ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။ သင်သည် အလုပ်တွင် ပိုမို၍ ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကို သိချင်နေသည့်အကြောင်း သူ/မကို သိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီတွင် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အဆင့်များနှင့် သင် မည်သို့ ကိုက်ညီမှုရှိသနည်းဆိုသည်ကို သင့်မန်နေဂျာထံမှ ပွင့်လင်းစွာ ပြန်လည်ပြောကြားပေးမှုကို ရအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ် နည်းဗျူဟာကျသော ရှုမြင်ခြင်းမျိုးထက် မဟာဗျူဟာကျသော ရှုမြင်ခြင်းမျိုး ရှိလာစေရန် လေ့လာရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ များပြားလွန်းသည့် လူတို့သည် သူတို့၏အဖွဲ့အစည်း ကို သူတို့၏ ဌာန သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် မြင်ကွင်းမှတဆင့်သာ မြင်လေ့ရှိကြပါသည်။ IT (အိုင်တီ-သတင်းအချက်လက်နှင့် နည်းပညာ)၊ ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များကိုပါ စဉ်းစား၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်နှင့်ကြည့်ပါ။ ပြိုင်ဘက်များ၏ နည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုမျိုး ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏ အထက်အရာရှိကို ကူညီပါ။
သင်၏အထက်အရာရှိနှင့် သူတို့၏ ဦးတည်ချက်များ လိုအပ်ချက်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာနိုင်ရန် လေ့လာပါ။ ထိုအခါ သင်သည် သူ/မအား ပိုမိုအောင်မြင်လာစေရန် ကူညီခြင်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ အရေးကြီးတာဝန်တစ်ခုကို အပြီးသတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဆိုပါက မိမိသဘောအရ အချိန်ပိုဆင်း၍ အလုပ်လုပ်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းပါ။ ၄င်းအချက်သည် အလုပ်အား စိတ်ထဲအလေးထားရှိထားပြီး ပေးဆပ်မှုပြုနိုင်ကြောင်း ပြသပေးရာရောက်ပါသည်။
သူတို့ ဘာတွေ လိုအပ်မည်နည်းဆိုသည်ကို သင်က ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့် သင်၏ အထက်အရာရှိကို ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ဖရန်၏ အထက် အရာရှိသည် အားလပ်ရက်အနားယူနေချိန်တွင် စီမံကိန်းအသစ် တောင်းဆိုမှုတစ်ခု ဝင်လာပါသည်။ နောက်ဆုံးတင်ရမည့်ရက်မှာ သူမ၏အထက်အရာရှိ ပြန်လာပြီး နောက်နှစ်ရက်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် သက်ဆိုင်သော သုတေသန လေ့လာချက်များကို စုစည်းခဲ့ပါသည်။ ၄င်းစိမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ဆိုသည်ကို အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ အထက်အရာရှိသည် အလွန်ပင် အထင်ကြီးလေးစားသွားပြီး၊ ဖရန်အား အစည်းအဝေးသို့ ခေါ်သွားပါသည်။ အနာဂတ် စီမံကိန်း အဆိုပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်စေပါသည်။
သင်၏ အထက်အရာရှိကို သတင်းမပြတ် သိရှိစေရန် ပြုလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အထက်အရာရှိများသည် အပတ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်များတွင် ရရှိသော သေးငယ်သည့် အောင်မြင်မှုများအကြောင်း မကြာခဏ သိလေ့မရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ၄င်းတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သင်၏ အထက်အရာရှိထံ လစဉ် အကျဉ်းချုပ်စာရင်းကို ပို့ပေးခြင်း'' ကိစ္စတို့ကို သေချာစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင့်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသူများ ရှိပါကလည်း သူတို့၏ အောင်မြင်မှုများကိုလည်း သင်၏ အထက်အရာရှိထံ နောက်ဆုံးသတင်း ပေးပို့ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းခွင်ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ထဲတွင်ထား၍ ပေးဆပ်မှုပြုနေခြင်း ကို ပြသပါ။
သင်၏ အသိပညာ/အတွေ့အကြုံတို့ကို မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်သင်တန်းများ သင် တက်ရောက်နိုင်ပါ သနည်း။ ဘွဲ့လွန်အဆင့် အရည်အချင်းမျိုးကိုမှ မဆိုလိုပါ။ သင်တန်းတို တစ်ခုပင်လျှင် အသုံးဝင်ကောင်းဝင်ပါလိမ့်မည်။ သင် တက်ရောက်အောင်မြင်သွားသောအခါ သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ လူများသိရှိရန် သေချာမှုရှိရန်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ် ဆိုလျှင် အချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ဖက်မှ လုပ်ကိုင်နေရင်းနှင့် Open University (မည်သူမဆို လူမျိုး၊ အသက်မရွေး လေ့လာနိုင်သော စာပေးစာယူတက္ကသိုလ်)မှာ ဘွဲ့တစ်ခုကို အချိန်ပိုင်းနှင့် လေ့လာရင်း ရရှိသွားပြီးသောအခါ ကုမ္ပဏီတွင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို သိရှိအောင်ပြုလုပ်၍ အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြုနေသော ဤကမ္ဘာတွင် သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း စီမံကိန်းအသစ်များ ရှာဖွေနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် ဈေးကွက်ထဲတွင် လစ်ဟာမှုတစ်ခုကို သတိထားမိပါက ကုမ္ပဏီမှ လူများ သိရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းမျိုးကို သေချာစွာပြုလုပ်ပါ။ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သုတေသနအပေါ် အခြေခံသည့် ကုမ္ပဏီတွင်း စာတမ်းလိုမျိုး တစ်ခု သင်ပြုစုနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာဖုံးတွင် သင့်နာမည်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အချို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင်၏နာမည်ကို သိရှိသွားကြအောင် သေချာစွာ ပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍ အခြားလူတိုင်းက သက်တောင့်သက်သာရှိသော အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်ဆင်ထားချိန်တွင် သင်သည် ပို၍ စမတ်ကျကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားမှု ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာအကြံ ပေးရမည်ဆိုပါက သင်သည် လက်ရှိအလုပ်ထက် တဆင့်မြင့်သောအလုပ်မျိုး လုပ်နေသကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ် ခြင်းသည် အခြားသူများက သင့်အား အခြားသော အလုပ်တာဝန်တစ်ခုတွင် ရှိနေပုံကို စိတ်ကူးနှင့်ပုံဖော်နိုင်ရန် ကူညီပေး ရာ ရောက်ပါသည်။ ၄င်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မိမိ ယုံကြည်ချက်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကို ပိုမိုနေသားကျစေ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ မဂ္ဂဇင်းတွင် စာရေးပေးနိုင်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းပါ။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီတွင်းရှိ များစွာသော သူတို့က သင့်အား တွေ့မြင်လာကြမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ အခြားဌာနများမှ လူများနှင့်လည်း သွားရောက် စကားပြောဆိုပါ။ သူတို့၏ အလုပ်အကြောင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်း သိရှိရန် ပြုလုပ်ပါ။ ဤသို့ပြုခြင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးကျလာမည်ဖြစ်ကြာင်း သင်မည်သည့်အခါမှ ကြိုတင်သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မကြာခဏပင် ဌာနပေါင်းစုံမှ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်းမျိုးဆောင်ရွက်ရန် အသင်းအဖွဲ့မျိုးအတွက် လိုအပ်ချက် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ သင်ကို ပိုပြီး လူသိများလေလေ၊ သင်၏အမည်က အကြံပြုခြင်းခံရဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေဖြစ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးအား theguardian.com မှ Denise Taylor ၏ Top tips to getapromotion at work ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
''မညျသညျ့အရာမဆို ဖွဈနိုငျပါသညျ။ ကွိုးစားလုပျရမညျ့ အလုပျနှငျ့ အလုပျကွိုးစားလုပျကိုငျခွငျးသာလြှငျ ဖွဈပါသညျ။" - မိုဖယျရာ
၄ငျးစိတျနသေဘောထားသညျ သငျ့အား အိုလံပဈရှတေံဆိပျနှဈခု ရရှိစကေောငျးရရှိစပေါလိမျ့မညျ။ သို့သျော သငျ့အား အလုပျတှငျရာထူးတကျစမေညျလားဆိုလြှငျ ဖွဈကောငျးဖွဈလာစနေိုငျမညျမဟုတျပါ။ မြားပွားလှနျးသညျ့လူမြားသညျ ရာထူးတိုးမွှငျ့ခွငျးခံရရနျ သို့မဟုတျ စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးသညျ့ တာဝနျလှဲအပျမှု အသဈတဈခုရရှိရနျ အလုပျကောငျးကောငျးလုပျပွခွငျး တဈမြိုးတညျးက သူတို့ လိုအပျသောအရာအားလုံးဟု ထငျကွပါသညျ။ သို့သျော လကျတှလေု့ပျငနျးခှငျတှငျ ၄ငျးတဈခကျြတညျးက လုံလောကျမညျ့ ပုံစံမရှိပါ။ သငျ၏ ကွိုးစားလုပျကိုငျပေးမှု အလဟာသ ဖွဈမသှားစရေနျ သခြောဖို့ သိထားရမညျ့ လကျတှအေ့သုံးကြ အကွံဉာဏျ အခြို့တငျပွလိုကျပါသညျ။
သငျ၏ ဦးတညျခကျြကို သငျသိပါ။
ရာထူးတိုးခွငျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အကွီးမားဆုံးသော လှဲမှားသညျ့အယူအဆမှာ ၄ငျးတို့သညျ သဘာဝအတိုငျး အခြိနျကွာလာလြှငျ ဖွဈလရှေိ့သညျဟု ယူဆခွငျးပငျဖွဈသညျ။ သငျသညျ ရာထူးတိုးခွငျးနှငျ့ထိုကျတနျနပွေီဟု ထငျမွငျနရေုံနှငျ့ မလုံလောကျပါ။ သငျသညျ အလုပျ၏ လိုလားခကျြမြားကို နားလညျရမညျ့အပွငျ သငျက ဘယျလို ၄ငျးလိုအပျခကျြမြားနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိကွောငျး ရှငျးလငျးစှာ ပွသနိုငျရမညျဖွဈသညျ။ ၄ငျးပွငျ သငျသညျ လကျရှိအလုပျအတှငျးမှာပငျ ရာထူးတကျ ခွငျးကို လိုခငျြပါသလား၊ (သို့မဟုတျ) အခွားနရောတဈခုခုတှငျ တဈဆငျ့မွငျ့တဈခုကို ရှာဖှနေပေါသလား။ အစကတညျးကပငျ သငျဘာလိုခငျြသလဲဆိုတာနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရှငျးလငျးမှုရှိပါစေ။ ထိုအခါမှ သငျ့ကို ထိုနရောသို့ ရောကျရှိစရေနျ ကူညီပေးမညျ့ မှနျကနျသော လှုပျရှားဆောငျရှကျမှုမြိုး သငျ လုပျကိုငျနိုငျမညျဖွဈသညျ။
သငျ၏ အထကျအရာရှိကို သငျ့ဘကျတှငျရှိနစေပေါ။
အကယျ၍ သငျသညျ ဌာနတှငျး ရာထူးတိုးခွငျးမြိုးကို ရညျရှယျထားပါက သငျ၏ အထကျအရာရှိကို သငျ့ဘကျတှငျရှိစေ ရနျ လိုအပျပါသညျ။ တဈဦးခငျြးတှဆေုံ့သညျ့ ပွနျလညျဆနျးစဈမှု အစညျးအဝေးမြိုး (one to one review meeting) ပွုလုပျနိုငျရနျ စီစဉျပါ။ သငျသညျ အလုပျတှငျ ပိုမို၍ ထိရောကျမှုရှိစရေနျ ဘယျလိုလုပျရမညျကို သိခငျြနသေညျ့အကွောငျး သူ/မကို သိအောငျပွုလုပျပါ။
သငျ၏ကုမ်ပဏီတှငျ ပိုမိုမွငျ့မားသညျ့ အဆငျ့မြားနှငျ့ သငျ မညျသို့ ကိုကျညီမှုရှိသနညျးဆိုသညျကို သငျ့မနျနဂြောထံမှ ပှငျ့လငျးစှာ ပွနျလညျပွောကွားပေးမှုကို ရအောငျပွုလုပျပါ။ သငျ၏ လုပျငနျးအဖှဲ့အစညျးအပျေါ နညျးဗြူဟာကသြော ရှုမွငျခွငျးမြိုးထကျ မဟာဗြူဟာကသြော ရှုမွငျခွငျးမြိုး ရှိလာစရေနျ လလေ့ာရနျ လိုအပျကောငျးလိုအပျမညျဖွဈသညျ။ မြားပွားလှနျးသညျ့ လူတို့သညျ သူတို့၏အဖှဲ့အစညျး ကို သူတို့၏ ဌာန သို့မဟုတျ လုပျငနျးခှငျ မွငျကှငျးမှတဆငျ့သာ မွငျလရှေိ့ကွပါသညျ။ IT (အိုငျတီ-သတငျးအခကျြလကျနှငျ့ နညျးပညာ)၊ ဈေးကှကျ မွှငျ့တငျရေးကဲ့သို့သော နယျပယျမြားကိုပါ စဉျးစား၍ ပိုမိုကယျြပွနျ့သော အမွငျနှငျ့ကွညျ့ပါ။ ပွိုငျဘကျမြား၏ နညျးဗြူဟာ၊ မဟာဗြူဟာမြားကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာလလေ့ာမှုမြိုး ပွုလုပျပါ။
သငျ၏ အထကျအရာရှိကို ကူညီပါ။
သငျ၏အထကျအရာရှိနှငျ့ သူတို့၏ ဦးတညျခကျြမြား လိုအပျခကျြမြားအကွောငျး ပိုမိုသိရှိလာနိုငျရနျ လလေ့ာပါ။ ထိုအခါ သငျသညျ သူ/မအား ပိုမိုအောငျမွငျလာစရေနျ ကူညီခွငျးအပျေါ အာရုံစူးစိုကျလာနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အကယျ၍ သူ အရေးကွီးတာဝနျတဈခုကို အပွီးသတျနိုငျရနျ လိုအပျသညျဆိုပါက မိမိသဘောအရ အခြိနျပိုဆငျး၍ အလုပျလုပျပေးရနျ ကမျးလှမျးပါ။ ၄ငျးအခကျြသညျ အလုပျအား စိတျထဲအလေးထားရှိထားပွီး ပေးဆပျမှုပွုနိုငျကွောငျး ပွသပေးရာရောကျပါသညျ။
သူတို့ ဘာတှေ လိုအပျမညျနညျးဆိုသညျကို သငျက ကွိုတငျခနျ့မှနျးခွငျးအားဖွငျ့ သငျ၏ အထကျအရာရှိကို ကူညီနိုငျပါသညျ။ ဥပမာ - ဖရနျ၏ အထကျ အရာရှိသညျ အားလပျရကျအနားယူနခြေိနျတှငျ စီမံကိနျးအသဈ တောငျးဆိုမှုတဈခု ဝငျလာပါသညျ။ နောကျဆုံးတငျရမညျ့ရကျမှာ သူမ၏အထကျအရာရှိ ပွနျလာပွီး နောကျနှဈရကျသာလြှငျ ဖွဈပါသညျ။ သူမသညျ သကျဆိုငျသော သုတသေန လလေ့ာခကျြမြားကို စုစညျးခဲ့ပါသညျ။ ၄ငျးစိမံကိနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ မညျသို့ လုပျကိုငျဆောငျရှကျရမညျနညျး ဆိုသညျကို အကွံပွုခကျြမြား ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ သူမ၏ အထကျအရာရှိသညျ အလှနျပငျ အထငျကွီးလေးစားသှားပွီး၊ ဖရနျအား အစညျးအဝေးသို့ ချေါသှားပါသညျ။ အနာဂတျ စီမံကိနျး အဆိုပွုခကျြမြား အကောငျအထညျဖျောရာတှငျလညျး ပါဝငျပတျသကျစပေါသညျ။
သငျ၏ အထကျအရာရှိကို သတငျးမပွတျ သိရှိစရေနျ ပွုလုပျပါ။
ကြှနျုပျတို့၏ အထကျအရာရှိမြားသညျ အပတျစဉျ ကြှနျုပျတို့၏ အလုပျမြားတှငျ ရရှိသော သေးငယျသညျ့ အောငျမွငျမှုမြားအကွောငျး မကွာခဏ သိလမေ့ရှိကွပါ။ ထို့ကွောငျ့ သငျသညျ ၄ငျးတို့ကို မှတျတမျးတငျခွငျးနှငျ့ သငျ၏ အထကျအရာရှိထံ လစဉျ အကဉျြးခြုပျစာရငျးကို ပို့ပေးခွငျး'' ကိစ်စတို့ကို သခြောစှာပွုလုပျပေးပါ။ အကယျ၍ သငျ့အတှကျ အလုပျလုပျပေးနသေူမြား ရှိပါကလညျး သူတို့၏ အောငျမွငျမှုမြားကိုလညျး သငျ၏ အထကျအရာရှိထံ နောကျဆုံးသတငျး ပေးပို့ပါ။
သငျ့ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးခှငျဘဝ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ စိတျထဲတှငျထား၍ ပေးဆပျမှုပွုနခွေငျး ကို ပွသပါ။
သငျ၏ အသိပညာ/အတှအေ့ကွုံတို့ကို မွှငျ့တငျနိုငျရေးအတှကျ မညျသညျ့သငျတနျးမြား သငျ တကျရောကျနိုငျပါ သနညျး။ ဘှဲ့လှနျအဆငျ့ အရညျအခငျြးမြိုးကိုမှ မဆိုလိုပါ။ သငျတနျးတို တဈခုပငျလြှငျ အသုံးဝငျကောငျးဝငျပါလိမျ့မညျ။ သငျ တကျရောကျအောငျမွငျသှားသောအခါ သငျ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျးမှ လူမြားသိရှိရနျ သခြောမှုရှိရနျပွုလုပျပါ။ ကြှနျုပျ ဆိုလြှငျ အခြိနျပွညျ့အလုပျတဈဖကျမှ လုပျကိုငျနရေငျးနှငျ့ Open University (မညျသူမဆို လူမြိုး၊ အသကျမရှေး လလေ့ာနိုငျသော စာပေးစာယူတက်ကသိုလျ)မှာ ဘှဲ့တဈခုကို အခြိနျပိုငျးနှငျ့ လလေ့ာရငျး ရရှိသှားပွီးသောအခါ ကုမ်ပဏီတှငျး သတငျးစာတှငျ ဖျောပွခွငျးခံခဲ့ရပါသညျ။
ခတျေရစေီးကွောငျးမြားကို သိရှိအောငျပွုလုပျ၍ အခှငျ့အလမျးအသဈမြားကို စောငျ့ကွညျ့ပါ။
ပွိုငျဆိုငျမှုပွုနသေော ဤကမ်ဘာတှငျ သငျ၏အဖှဲ့အစညျးသညျလညျး စီမံကိနျးအသဈမြား ရှာဖှနေမေညျ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အကယျ၍ သငျသညျ ဈေးကှကျထဲတှငျ လဈဟာမှုတဈခုကို သတိထားမိပါက ကုမ်ပဏီမှ လူမြား သိရှိအောငျ ပွုလုပျပေးခွငျးမြိုးကို သခြောစှာပွုလုပျပါ။ သငျပွုလုပျခဲ့သညျ့ သုတသေနအပျေါ အခွခေံသညျ့ ကုမ်ပဏီတှငျး စာတမျးလိုမြိုး တဈခု သငျပွုစုနိုငျပါသညျ။ မကျြနှာဖုံးတှငျ သငျ့နာမညျနှငျ့ နောကျဆုံးတှငျ အခြို့သော ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျမြား ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ သငျ၏နာမညျကို သိရှိသှားကွအောငျ သခြောစှာ ပွုလုပျပါ။
အကယျ၍ အခွားလူတိုငျးက သကျတောငျ့သကျသာရှိသော အဝတျအစားမြိုး ဝတျဆငျထားခြိနျတှငျ သငျသညျ ပို၍ စမတျကကြ သပျသပျရပျရပျ ဝတျဆငျထားခွငျးဖွငျ့ သိသာထငျရှားမှု ရှိနမေညျဖွဈသညျ။ ကောငျးစှာအကွံ ပေးရမညျဆိုပါက သငျသညျ လကျရှိအလုပျထကျ တဆငျ့မွငျ့သောအလုပျမြိုး လုပျနသေကဲ့သို့ ဝတျဆငျပါ။ ဤသို့ပွုလုပျ ခွငျးသညျ အခွားသူမြားက သငျ့အား အခွားသော အလုပျတာဝနျတဈခုတှငျ ရှိနပေုံကို စိတျကူးနှငျ့ပုံဖျောနိုငျရနျ ကူညီပေး ရာ ရောကျပါသညျ။ ၄ငျးကဲ့သို့ ပွုလုပျခွငျးသညျ မိမိ ယုံကွညျခကျြကို မွှငျ့တငျနိုငျရနျ ကူညီနိုငျသကဲ့သို့ ကြှနျုပျတို့ ကို ပိုမိုနသေားကစြေ၊ သကျတောငျ့သကျသာရှိစပေါသညျ။
ကုမ်ပဏီ၏ မဂ်ဂဇငျးတှငျ စာရေးပေးနိုငျကွောငျး ကမျးလှမျးပါ။ ဤသို့ ပွုလုပျခွငျးသညျ ကုမ်ပဏီတှငျးရှိ မြားစှာသော သူတို့က သငျ့အား တှမွေ့ငျလာကွမညျဟု ဆိုလိုပါသညျ။ အဖှဲ့အစညျး၏ အခွားဌာနမြားမှ လူမြားနှငျ့လညျး သှားရောကျ စကားပွောဆိုပါ။ သူတို့၏ အလုပျအကွောငျးနှငျ့ စိနျချေါမှုမြားအကွောငျး သိရှိရနျ ပွုလုပျပါ။ ဤသို့ပွုခွငျးသညျ မညျသညျ့အခြိနျတှငျ အသုံးကလြာမညျဖွဈကွာငျး သငျမညျသညျ့အခါမှ ကွိုတငျသိနိုငျမညျမဟုတျပါ။ မကွာခဏပငျ ဌာနပေါငျးစုံမှ လုပျငနျးမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရမညျ့ စီမံကိနျးမြိုးဆောငျရှကျရနျ အသငျးအဖှဲ့မြိုးအတှကျ လိုအပျခကျြ ပျေါလာတတျပါသညျ။ သငျကို ပိုပွီး လူသိမြားလလေေ၊ သငျ၏အမညျက အကွံပွုခွငျးခံရဖို့ ဖွဈနိုငျခွေ မြားလလေဖွေဈပါသညျ။
ဤဆောငျးပါးအား theguardian.com မှ Denise Taylor ၏ Top tips to getapromotion at work ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါသညျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
Permalink Reply by DaiSy Kyaw on May 29, 2015 at 19:02
Permalink Reply by Aung Hlaing Win on May 29, 2015 at 23:31
Permalink Reply by May Soe Htike on May 30, 2015 at 0:14
Permalink Reply by aungnaingthu on May 31, 2015 at 17:43
Permalink Reply by Myint Myint Oo on June 1, 2015 at 10:08
Permalink Reply by Aye Ko Ko on June 1, 2015 at 21:07
Permalink Reply by kyaw thu win on June 7, 2015 at 17:33
Thanks! For your belles-lettres>>>>
Permalink Reply by Khine Han Ni Myint@scarlet annie on June 18, 2015 at 16:43
most people forget to give report of what you have done, so your manager do not know without telling him. This fact is really true. thz for yr sharing. (y)
Permalink Reply by Pyae Min on June 26, 2015 at 9:50
Permalink Reply by Htay Ei Nwe on September 1, 2015 at 22:43